Fandroahana ny fihetsika mamono tena amin'ny tanora
Ny vanim-potoan'ny tetezamita dia fotoan-tsarotra tena sarotra eo amin'ny fiainan'ny zanakao, ary indraindray na dia ireo zaza faran'izay mora sy mankatò indrindra aza dia manomboka miova be amin'io fotoana io. Izany dia vokatry ny "oram-baratra" hormona ao amin'ny vatana, sy ny fanavaozana ara-psikolojika, izay manery ny zanakao na ny zanakao matotra mba hamerina handinika ny toerana misy azy eto amin'izao tontolo izao ary hanapa-kevitra ny amin'ny hoe iza izy. Indraindray dia mifandray amin'ny fahaketrahana goavana izy, noho izany dia tena zava-dehibe ny ray aman-dreny hahafantatra momba ny fisorohana ny fihetsika mamono tena ao amin'ny tanora. Ny ankizilahy na ankizivavy indraindray tsy afaka miatrika ny fihetseham-pony, ary mety hiteraka loza izany.
Ny tena zava-dehibe amin'ny fihetsika mamono tena amin'ny tanora
Amin'ny antony mahatonga ny ratra mafy sy ny fahafatesana mihitsy aza any am-pianarana, dia ilaina ny manasongadina ireto manaraka ireto:
fahatsapana alahelo amin'ny hafa, fialantsiny maneran-tany ary fanirery manoloana ny tsy fifankahazoan'ny zatovo;
tsy fahafaham-po amin'ny tenanao; fanenenana noho ny asa rehetra, ny fisian'ny komplexa momba ny fisehoana na fifandraisana amin'ny namana;
tahotra ny famaizana;
Ny fitiavana tsy faly (izany no mahatonga ny fisorohana ny fihetsika mamono tena amin'ny adolantsento any am-pianarana dia ilaina fotsiny: ny ankamaroan'ny fifandraisana amin'izao fotoana izao dia mifamatotra eo anatrehan'ny mpampianatra);
ny tsy fahampian'ny fahalalana avy amin'ny havan-tiana, ny fahaverezany, ny fisarahana amin'ny ray aman-dreniny ;
tahotra ny fampijaliana sy ny fanalam-baraka ataon'ny mpiara-mianatra;
faniriana tsy mitsaha-mitombo ny fisainana, ny faniriana hampisy fangorahana na hisorohana ny vokatry ny toe-javatra mampalahelo;
manahaka ireo litera literatiora, maherifo fanta-daza na peo.
Inona no tafiditra amin'ny fisorohana ny fihetsika mamono tena amin'ny fahazazana?
Mampalahelo fa na ireo ray aman-dreny be fitiavana indrindra aza dia tsy afaka manonitra fa ny eritreritra handehanana any amin'ny tontolo manaraka dia tsy hitsidika ny zanany ao amin'ity toe-javatra ity. Raha ny zava-misy, amin'ny vanim-potoanan'ny tetezamita, dia mety hiteraka valinteny tsy mety ny toe-javatra mampalahelo noho ny tsy fisian'ny psyche. Eritrereto, ohatra, ny toro-hevitra amin'ny ray aman-dreny momba ny fisorohana ny fihetsika mamono tena amin'ny adolantsento:
Mandania fotoana betsaka araka izay azo atao amin'ny zanakao efa lehibe, manontany azy momba ny raharahany, ny fianarany, ny namana. Arakaraka ny hitera-jaza na zanaka vavy no hitokisanao, ny fahitanao azy aloha dia ny soritr'aretina momba ny famonoan-tena: ny fahaketrahana, ny fiovan'ny fitondran-tena, ny tsy fisian'ny fifandraisana akaiky amin'ny mitovy taona, ny resaka matetika momba ny fahafatesana. Tena zava-dehibe ny fisorohana ny fihetsika mamono tena amin'ny tanora.
Omeo ny zanakao hahatakatra fa manaiky azy ianao, na dia nanao fahadisoana aza izy ary nanao ny zavatra tsy nety. Ny singa manan-danja amin'ny fisorohana ny fihetsika mamono tena eo anivon'ny tanora dia ny fahavononana hanampy raha misy tanora na ankizivavy mivantana mamono tena. Manao tsinontsinona na manararaotra ireo teny ireo - ny zavatra ratsy indrindra azonao atao mba hanosehana ny fahafatesan'ny olona an-tsitrapo.
Mianara mihaino tsara. Indraindray antsasak'adiny, izay navotsoina avy amin'ny vavan'ny zatovo iray niaiky fa ratsy tokoa izy, dia afaka mamonjy aina tokoa.
Aza miady hevitra amin'ilay zaza mieritreritra ny hiala amin'ity tontolo ity, ary mametraha fanontaniana mitarika. Mba hisorohana ny fihetsika mamono tena amin'ny ankizy sy ny tanora dia ilaina ny manaisotra ny fanehoana ny herisetra avy amin'ny olon-dehibe iray izay mety ho tafintohina ary tsy hitandrina tsara rehefa manonona ny famonoan-tena ho fomba hamahana olana.
Manolora mba hiheverana ny fomba hivoahana toe-javatra sarotra. Ny fanoloran-kevitra rehetra momba ny fisorohana ny fihetsika mamono tena amin'ny tanora, dia sarotra indrindra ny manatanteraka izany, fa ny fanabeazana ao amin'ny sekolim-piravoravoana mahafoy ny fanantenana ho an'ny tsara indrindra no fomba tsara indrindra entina hamokarana.
Inona no hanomezana zatovo iray ho an'ny fitsingerenan'ny andro nahaterahany?
Ahoana no fomba hamoahana ankizy?
Fanadihadiana momba ny tovovavy iray manam-pahaizana amin'ny 14 taona
Varicocele amin'ny adolescents
Ahoana ny famindrana ankizy any amin'ny sekoly hafa?
Ny ankizy mangalatra - inona no tokony hatao?
Akanjo fotsy ho an'ny zatovovavy
Ahoana ny fomba hanoratana hazo iray ho an'ny ankizy any am-pianarana?
Ny glaukom - ny antony, ny soritr'aretina, ny fitsaboana ary ny fisorohana
Akanjo fotsy - inona no tokony harahina ary ahoana no fomba hamoronana sary maoderina?
Apple jam miaraka amin'ny orange - recipe
Taorian'ny fihazakazahan'ny mpankafy, naverin'i Britney Spears ny sitrapo
Kiraro vehivavy mahazatra - fararano-ririnina 2015-2016
Arbre ny plasterboard
Ny Nosy Imperial
Ahoana no ahazoana kitapo?
Fashion Coats - Fall 2016
Mifandraisa amin'ny dermatitis
Musat ho an'ny antsy - inona io?
Taorian'ny fanesorana ilay gaza dia miharatsy ny lafiny ankavanana
Nanafika ny sipan'ny zanakavavin'i Dylan i Sean Penn
Ahoana no ahafahanao manondraka steak ao anaty lasitra iray?